के हो ‘वर्क फ्रम होम’ पछि लोकप्रिय बनिरहेको ‘हाइब्रिड वर्क मोडेल’, किन ठूला कम्पनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैछ ? « Bizkhabar Online
के हो ‘वर्क फ्रम होम’ पछि लोकप्रिय बनिरहेको ‘हाइब्रिड वर्क मोडेल’, किन ठूला कम्पनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैछ ?
23 May, 2022 10:41 am
काठमाडौं । कोरोना अवधिमा घरबाट काम गर्नु अर्थात ‘वर्क फ्रम होम’ सामान्य बन्यो । यस्तो अवस्थामा धेरै कम्पनीहरूले ‘वर्क फ्रम होम’ मोडलललाई स्थायी रुपमै लागू गरेका छन् भने पछिल्लो समय कतिपयले हाइब्रिड संस्कृति पनि सुरु गरेका छन् । जसमा केही दिन अफिसबाट र केही दिन घरबाट काम गर्न सकिन्छ ।
कम्पनी र कर्मचारी दुबैले वर्क फ्रम होम कल्चरलाई धेरै हदसम्म मन पराएका छन् । तर, अफिस गएपछि मात्र काम गर्न रुचाउनेको कमी पनि छैन । आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरूमा घरबाट काम गर्ने संस्कृतिको सबैभन्दा बढी प्रशंसा भइरहेको छ । यी कम्पनीहरूले कोरोना अवधिमा अधिकांश दिन घरबाट काम गर्ने संस्कृतिलाई कायम राखेका थिए ।
कम्पनीको वेबसाइटबाट प्राप्त जानकारी अनुसार टीसीएसले अस्थायी रुपमा घरबाटै काम गर्ने सुविधा दिएको थियो । तर, यसलाई लामो समयसम्म अपनाउनुपर्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीले केही समय अगाडि हाइब्रिड ढंगले काम गर्न चाहेको बताएको थियो जसमा कर्मचारीले केही दिन अफिसबाट र केही दिन घरबाट काम गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले एक पटकमा २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा रहने बताएको थियो । अबको दिनमा यो अवस्था कस्तो हुन्छ हेर्नु चासोको विषय हुनेछ ।
आईटी कम्पनी इन्फोसिसल हाइब्रिड वर्किंग मोडलमा काम गरिरहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा विकास केन्द्र नजिकै बस्ने कर्मचारीलाई हप्ताको २ दिन कार्यालय आउन भनेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले टाढा बस्नेलाई कार्यालयमा बोलाउनेछ । तेस्रो चरणमा कम्पनीले हाइब्रिड काम गर्ने मोडलमा काम गर्ने योजना बनाएको छ जसमा केही दिन कर्मचारीले कार्यालयबाट र केही दिन घरबाट काम गर्नेछन् ।
आईटी कम्पनी एचसीएलले यसको लागि कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य र सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहोस् भन्ने कम्पनी चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले हाइब्रिड मोडलमा काम गरिरहेको छ । अर्थात् केही दिन अफिस र केही दिन घर । हेर्दा यो हाइब्रिड वर्किंग मोडल अहिले हरेक कम्पनीको पहिलो रोजाइ बनेको छ । अनुवाद गरिएको